University of Rostock - Waxbarashada Sare ee Europe, Germany
gaabinta : UR
aasaasay : 1419
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Rostock
Qor at University of Rostock
Iyada oo ay 200,000 deggan, Rostock waxaa lagu gartaa cilmiyeysan, dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan by 15,000 ardayda iyo ciidan shaqada of a 5,000 ee University of Rostock iyo rugta jaamacadda. maalgelinta Dibadda kiciyey inuu cilmi u kacay inta u dhaxaysa 2005 iyo 2010 by 83% oo hadda u taagan kor ku xusan 47 million Euros sanadkiiba. The University of Rostock ka mid ah tobanka ugu goobaha waxbarashada sare aasaasaha-saaxiibtinimo ee Germany. Dhaqaalaha gobolka ayaa ka faa'iideystey ka badan 800 Shirkadaha bilaabi-up ka jaamacadda tan iyo markii la bilaabay 1991. Dhallinyarada ka soo West of Germany iyo tiro sii kordhaysa oo ka mid ah ardayda ajnabiga ah waxaa ay ogaadeen Rostock sida goobta waxbarasho ah. Ardayda ka 99 wadamada laga heli karaa Dhanka kale on afarta goobood campus magaalada. Tan iyo markii ay 1991 ka badan 500 million Euros ayaa maalgashatay adeegyada aasaasiga ah ee jaamacadda. by 2015 waxay wadar ahaan doonaa 750 million.
Waxbarashada iyo cilmi-baarista bilaabay in Rostock xitaa 73 sano ka hor Columbus helay America sida jaamacadda waxaa durba la aasaasay 1419. Wax badan ayaa beddelay in waqtigaas. Sida awood farsamo la aasaasay 1951 – mid ugu horeeyay abid ee la aasaasay jaamacadda classical. Badan oo cusub, dhismayaasha casriga ah, sida campus gebi cusub ee sayniska dabiiciga ah ee degmada Suedstadt, wakiil xoogga cusub iyo casriga ah ee aannu jaamacadaha. In 2011 ku saabsan 15,000 ardayda wax ka barato jaamacad Rostock ee.
The waaxda sayniska waaweyn - cilmiga ganacsiga, aadanaha, cilmiga injineernimada, sharciga, daawo, cilmiga dabiiciga ah iyo fiqiga - ayaa labadaba in cilmi-baarista iyo waxbarashada wakiil ka dhiga jaamacadda Rostock.
radition iyo hal-abuurka waa alaabooyinka of our ku dhowaad 600-sano taariikhda. maanta, la 2,200 shaqaalaha iyo 15,000 ardayda, Jaamacadda Rostock bixisaa aragtiyo xiiso beerihiisa ku dhawaad ​​oo dhan sayniska. Iyadoo Life afar khadadka profile, Light iyo Xaalada / Systems Maritime / Gabowga Science iyo Humanities / Aqoonta - Dhaqanka - Badalka, Jaamacadda Rostock ayaa ugu qubo beeraha maadooyinka ay u fiican cilmi ee meelaha cilmiga dabiiciga ah iyo farsamada, daawo, sayniska nolosha, aadamaha iyo cilmiga dhaqanka. Xirmada caadiga ah tallaabooyinka oo dhammuba aannu marno: waxaan rabnaa in aan ku yaab leh qaab.
Magaalada jaamacadda Hanseatic of Rostock waa meel fiican oo ay u baran, cilmi-baarista iyo live. Xarunta dhaqaalaha iyo sayniska ee North East waa mid aad u sasabasho, iyadoo jawiga magaalada weyn dhexe ee mid ka mid ah goobaha dalxiiska ugu quruxda badan ee Germany oo dhan. Baro gargaarka our naftaada! Waxaan rajeyneynaa in aan aragno.
Kuliyada Beeraha iyo Deegaanka Sciences
Kuliyadda Sayniska Computer Engineering iyo korontada
Kuliyada Farsamada Engineering iyo Technology Marine
Kuliyadda Xisaabta iyo Sayniska Dabiiciga ah
Kulliyadda Dhaqaalaha iyo Bulshada Sciences
t la aasaasay 1419 by xaqiijinta Pope Martin V oo sidaas waa jaamacadda ugu da'da weyn ee Northern Europe.
In Germany, waxaa hadhay shan oo keliya jaamacadaha la aasaasay ka hor, halka Heidelberg iyo Leipzig kaliya si joogto ah shaqeeya tan iyo markaas: Heidelberg (1386), Cologne (1388), Erfurt (1392/1994), Würzburg (1402/1582) iyo Leipzig (1409). Taas ayaa ka dhigaysa University Rostock jaamacadda ugu da'da weyn saddexaad Jarmal hawlgal joogto ah.
Inta qarniga 15aad, Jaamacadda Rostock lahaa ku saabsan 400 si ay u 500 ardayda sanad walba, tiro badan oo wakhtigaas. Rostock ka mid ah jaamacadaha ugu weyn ee Germany waqtiga ahaa iyo qaar badan oo ka mid ah ardayda ay sidoo kale ka yimid wadamada Low, Scandinavia ama dalalka kale xuduud badda bari.
In koorsada of halgan siyaasadeed iyo cadaadis ka kaniisadda, jaamacadda u dhaqaaqay Greifswald in 1437 oo waxaa soo hadhay ilaa 1443. From 1487 si ay u 1488 waxbaridda dhacay Lübeck.
A dhowr sano ka dib magaaladii Rostock, ay jaamacad sidoo kale noqday Protestant in 1542. Humanism iyo Lutheranism ayaa qeexaysa sifooyinka of jaamacadda. Ka dib markii Soddon Sanno’ War (1618-1648), Jaamacadda Rostock ciyaaray kaliya door gobolka. Marka “lahaanshaha” Jaamacadda dhaqaaqay magaalada ka gobolka (Grand Duchy ee Mecklenburg-Schwerin) in 1827, si kastaba ha ahaatee, wax wanaagsan isku baddalay. dhammaadkii qarnigii 19aad arkay hawlaha dhismaha deeqsi ah in Rostock ee Mater Alma iyo jaamacadda ugu dhakhsaha badan dib ay sumcad jir ka mid ah jaamacadaha dalka Jarmalka.
On munaasabadda sanad guuradii 500aad ee jaamacadda, Albert Einstein iyo Max Planck on helay doctorates sharafeedka 12 November 1919. Tani waxay ka dhigtay Jaamacadda Rostock machadka hore ee tacliinta sare dunida ee ay abaalmarinta sharaftan in Einstein. Waxa xiiso leh oo ku filan, doctorate ma burin xiligii ay talinayeen Nazi Germany (1933-1945), inkastoo amarrada noocaas ah by naasiga ah. Sababta tani weli la garanayn. David Katz, Hans Moral (of) (ismiidaamin ah ka go'an) iyo kuwa kale posts ku waayey 1933.
dhamaadka ee dagaalkii labaad ee caalamiga ah ee 1945 keenay isbedel badan. jaamacadda, hadda isu raadinta ee Zone Soofiyeeti ee Germany (Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Jarmal ah ka dib), waxaa dib loo furay on 24 February 1946. The Kulliyadda Law la xiray in 1951, a Kuliyada Beeraha la soo bandhigay in 1950 iyo in 1951 arkay furitaanka of a Department of Dhismaha maraakiibta (baxshay Faculty of Technologyin 1963). The University of Rostock ahaa jaamacadda ugu horeysay dhaqanka ee Germany si uu u furo awood farsamo. In 1952, ah Kulliyadda ofAviation oo la furay, laakiin ugu danbeyn raray dhaw.
In 1976 jaamacad la baxshay Wilhelm-Pieck-Universität ka dib Wilhelm Pieck, Madaxweynihii u horeeyay ee Jamhuuriyadda Jarmalka Democratic. bedelayaan waxaa la burin ka dib keenida Jarmalka.
In 1978, jaamacadda ku hawlan iskaashi la University Cochin ee Sayniska iyo Technology (seamstress), si ay uga caawiyaan la qorsheeyo qaab-dhismeedka koorsada iyo taageero horumarka ee Waaxda Ship Technology at CUSAT. Sidoo kale, koox ka mid ah xubnaha awood Rostock ayaa loo diray Cochin University of Science iyo Technology si ay u hagaajinta goobaha cilmiga ee jaamacadda, harsan ilaa 1980. Meesha wax garadka Cochin University of Science iyo Technology ee Department of Technology Ship in industry badaha adduunka waxaa sidaas inta badan lagu tiriyaa in ay taageero ballaaran oo ka mid ah Jaamacadda Rostock.
Dhaqaalaha gobolka hagaagtay sida badan 800 Shirkadaha ka jaamacadda tan iyo markii la bilaabay 1991. maalgelinta Dibadda cilmi kordhay intii u dhaxaysay 2005 iyo 2010 by 83% oo hadda kor ku xusan yahay 47 million Euros sanadkiiba. In ka badan 500 million Euros ayaa maal kaabayaasha jaamacadda tan 1991, kaas oo gaari doona 750 million Euros by 2015. Tirada dadka dhalinyarada ah ka soo Germany West iyo ardayda caalamiga ah, kuwaas oo dooran University of Rostock sida goobta waxbarasho ah, waxaa sii kordhaya sanad walba. Ardayda International ka 99 dal oo kala duwan ayaa la bartay at University of Rostock. In 2007, Jaamacadda Rostock soo ururiyey awoodda cilmi ay saddex lines profile: Life, Light & Xaalada (LLM), Systems Maritime, iyo Gabowga Shaqsiyaadka iyo Society. In 2010 afraad ah ayaa lagu daray, loo yaqaan Aqoonta-Dhaqanka-Badalka. Life, Light & Xaalada horumarisa fikradaha cusub ee teknoolajiyada mustaqbalka ku salaysan habka qaaradda iyo kelli oo xidhiidh la leh optics laser iyo cilmiga nolosha. Maritime Systems mideeya oceanographers, injineerada, culimada aadanaha, saynisyahano beeraha iyo arrimaha bulshada, dhaqaaleyahannada iyo qareennada. Gabowga Shaqsiyaadka iyo Society ayaa sida ay diirada u nololeedka is-go'aamiyey in da 'ah. heshiisyo Aqoonta-Dhaqanka-Badalka warbaahinta iyo qof kaa wakiil aqoonta, Isbadal aqoonta, aqoonta iyo interculturalism iyo sidoo kale aqoon iyo awood.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Rostock ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Rostock rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Rostock
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Rostock.